सत्य घटनाहरूमा आधारित पाँच डरलाग्दो फिल्महरू - iHorror
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	सत्य घटनाहरूमा आधारित पाँच डरलाग्दो फिल्महरू
सत्य घटनाहरूमा आधारित पाँच डरलाग्दो फिल्महरू
by अस्टिन आर जर्मन जुन 22, 2022
by अस्टिन आर जर्मन जुन 22, 2022 32,175 हेराइहरू
१ Hor हरर चलचित्रहरू सही कथाहरूमा आधारित
हामीले पपकोर्न खाँदा दर्शकहरूलाई थियेटरको सिटहरूमा खिच्ने कुरा के हो? एउटा विचार वाक्यांश हो, "सत्य घटनामा आधारित". मताधिकारको लागि कुख्यात रूपमा प्रयोग भएको बयान, टेक्सास चेनसा नरसंहार। टोबे हूपरको उत्कृष्ट कृति शिथिल रूपमा आधारित थियो सिरियल किलर एड गेन, तर निस्सन्देह, टेक्सासमा कुनै वास्तविक चेनसा-वेल्डिंग पागल, वा नरभक्षी परिवार छैन (कम्तीमा मेरो ज्ञानमा छैन)। यद्यपि, निम्न पाँच डरलाग्दो डरावनी फिल्महरू छन् जुन वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छन्।
५. द पसेसन (२०१२)
2012 मा Sam Raimi उत्पादन कब्जा थिएटरहरूमा रिलिज भएको थियो। ओले बोर्नेडलद्वारा निर्देशित यो चलचित्रमा जेफ्री डीन मोर्गन, नताशा कालिस, माटिस्याहु र म्याडिसन डेभनपोर्टले अभिनय गरेका छन्।
जब दुई दिदीबहिनीहरू आफ्नो बुबासँग सप्ताहन्त बिताइरहेका छन्, तिनीहरू एक यार्ड बिक्रीमा रोक्छन् जहाँ एन्टिक बक्सले एक जवान केटीलाई लोभ्याउँछ। उनको बुबाले आफ्नी छोरी एमिलीको लागि बक्स किन्नुहुन्छ, भित्र के छ भनेर अनजान। एकपटक उनले बाकस खोलेपछि, उनले दुष्ट 'डिब्बुक' आत्मालाई रिलिज गर्छिन् र यसले उसलाई कब्जा गर्छ। वर्षौंदेखि धेरै अनुमान र उपहासले फिल्मलाई प्रेरित गरेको कथालाई घेरिएको छ।
जुन 2004 मा, लस एन्जलस टाइम्सका लागि लेख्दै, लेस्ली गोर्नस्टेनले "जिन्क्स इन ए बक्स" शीर्षकको लेख लेखे। यो छोटो कथा eBay मा पत्ता लगाइएको प्रेतवाधित बक्समा आधारित थियो, Dybbuk बक्स। eBay सूची अनुसार, वस्तु 2001 मा मृत्यु भएको होलोकास्ट बाँचेका व्यक्तिमा फेला परेको थियो। बिक्रेता, केभिन मनिसले यसलाई सम्पत्ति बिक्रीमा उठाएका थिए।
मानिसका अनुसार, डिब्बुक बक्समा दुई 1920 पेनीहरू, गोरा र खैरो कपालका दुई तालाहरू, एउटा मूर्ति (डिब्बुक), एउटा वाइन गोब्लेट, सुकेको गुलाबको पात, र अक्टोपसको खुट्टा भएको एउटा मैनबत्ती होल्डर थियो। मानिसले भने कि यहूदी लोककथा अनुसार, एक Dybbuk एक अस्थिर आत्मा हो जुन जीवित बस्न चाहन्छ।
उनको जन्मदिनको लागि आमालाई बक्स दिएपछि, उनलाई तुरुन्तै हृदयघात भयो। बक्सबाट डराएर मनिसले यसलाई eBay मा पुन: सूचीबद्ध गरे। एक नयाँ मालिक अब Dybbuk बक्सको कब्जामा थियो; जेसन ह्याक्सटन नाम गरेका व्यक्तिले उक्त वस्तु किनेका थिए । उहाँ एक संग्रहालय क्यूरेटर र धार्मिक सामग्री को संग्रहकर्ता हुनुहुन्थ्यो। वस्तुसँगको समयमा, उनले 2011 मा "द डिब्बुक बक्स" पुस्तक लेखे। पुस्तक प्रकाशित हुँदै गर्दा, ह्याक्सटनले बताए कि उनले खोकीको डरलाग्दो मिनेट अनुभव गर्न थाले। उसले सामान्यतया खोक्दा रगत निस्कन्थ्यो र उसको छाला पित्तमा फुट्यो। यो अफवाह छ कि जब चलचित्रको चर्चा चलिरहेको थियो, ह्याक्सटनले राइमीलाई बक्स प्रस्ताव गरे, जसले अस्वीकार गरे।
यो पछि रिपोर्ट गरिएको थियो कि सेटमा अनौठो घटनाहरू भयो, जस्तै बत्तीहरू विस्फोट, र फिल्मका अधिकांश सामग्रीहरू गोदाममा आगलागीमा नष्ट भएका थिए। अन्तमा, ह्याक्सटनले बाकसलाई आशीर्वाद दिनुभयो र रब्बीहरूको समूहले छाप लगायो। ह्याक्सटनले यसलाई भूमिगत गाडिदिए जबसम्म अलौकिक ख्यातिको Zak Bagans Dybbuk Box मा चासो राखे र ह्याक्सटनबाट खरिद गरे।
बगान्स द्वारा बक्सको अधिग्रहण र फिल्मको रिलीज पछि, केभिन मनिसले दावी गरे कि उनले सम्पूर्ण कथा बनायो। त्यो सबै नक्कली थियो। यद्यपि दुबै पुरुष, म्यानिस र ह्याक्सटनले फिल्मबाट पैसा कमाए, तितो प्रतिद्वन्द्वी सुरु भयो। ह्याक्सटनले म्यानिससँग असहमति जनाए र भने कि यदि म्यानिसले काल्पनिक कथाको इन्जिनियर गरेको भए पनि, मानिसले कब्बालाह प्रयोग गरेर यसलाई आफैंले श्राप दियो। 2019 मा, द इन्क्वायररले उनीहरूको शंकास्पद लेखे, मान्निसले कथाको गलततालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको स्क्रिनसटहरू देखाउँदै र कसरी उसले वास्तवमा पौराणिक कथालाई आफैंले कन्ज्युर गर्यो। Haxton, तथापि, अधिक सार्वजनिक उपस्थिति बनायो र सधैं मिडिया को लागी उपलब्ध थियो। उनले दाबी गरे, "केभिन मनिस केवल पृष्ठभूमि शोर थियो। केभिन भन्दा ठूलो त्यो बक्समा केहि छ।"
2018 मा Ghost Adventures को एक एपिसोडमा, बक्सले बगानका एक साथी संगीतकार पोस्ट मालोनलाई असर गर्यो। एपिसोडमा, Zak Bagans Dybbuk बक्स खोल्छ जबकि मालोन एउटै कोठामा छ। यद्यपि बगानले वस्तुलाई छोइरहेको छ, मालोनले जाकको काँधमा हात राखेका थिए।
तपाईंले माथिको कार्यक्रमबाट केही भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टका अनुसार, दुई महिनापछि मालोनले आफ्नो निजी जेटको पाङ्ग्रा उडानमा बिग्रिएपछि आपतकालीन अवतरण गर्नुपरेको थियो। त्यति मात्र होइन, उनी कार दुर्घटनामा परेका थिए र उनको पुरानो रेसिडेन्सी फुटेको थियो । Bagans यसो भन्दै रिपोर्ट गरिएको छ, "मलाई लाग्छ कि Dybbuk Box मा धेरै धेरै छ र यसको उत्पत्ति को बावजूद, यो धेरै श्रापित र दुष्ट छ।" Zak जारी राख्छन्, "मलाई अचम्म लाग्दैन कि यसबाट थप विवाद र द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन्छन्। Dybbuk Box ले सधैं प्रश्न र षड्यन्त्र खडा गरेको छ। र यसले यसको कथा थप्छ। ”
तपाईं Dybbuk बक्स हेर्न सक्नुहुन्छ र लस भेगास, नेभाडा मा Zak Bagans Haunted Museum मा आफ्नो लागि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। म RIP भ्रमण सिफारिस गर्छु। मनमोहक चलचित्र कब्जा, प्राइम, Vudu, Apple TV, र Google Play मा स्ट्रिम गर्न उपलब्ध छ।
४. द हिल्स ह्याभ आइज (१९७७, २००६)
1972 मा, वेस क्रेभनले आफ्नो फिल्म, द लास्ट हाउस अन द लेफ्टबाट दर्शकहरूलाई चकित पारे। उनको निम्न फिल्म, द हिल्स हेभ आइजले फेरि एक पटक थिएटर दर्शकहरूलाई ध्रुवीकरण गर्यो।
चलचित्रमा अभिनय गरिएको थियो: सुसान लानियर, जोन स्टेडम्यान, जानस ब्लीथ, पौराणिक डी वालेस र प्रतिष्ठित माइकल बेरीम्यान। वास्तवमा, बेरीम्यानलाई फिल्मको पोस्टरहरूमा प्रमुख रूपमा चित्रित गरिएको थियो। फिल्ममा, एक परिवार क्यालिफोर्निया जाने बाटोमा नेभाडा मरुभूमि पार गर्दै छ। सिडी ग्यास स्टेशनमा रोकिएपछि, तिनीहरूको कार कतै बिचमा बिग्रन्छ। घण्टा बित्दै जाँदा, हिंस्रक जंगली नरभक्षीहरूले तिनीहरूलाई शिकार गर्न थाल्छन्।
2006 मा, रिमेक ग्रीनलाइट थियो। अलेक्जान्डर अजाले निर्देशकको जिम्मेवारी लिए र क्रेभनले स्क्रिप्टको निरीक्षण गरे। टेड लेभिन, ड्यान बायर्ड, क्याथलीन क्विनलान, आरोन स्ट्यानफोर्ड, टम बोवर, र लौरा ओर्टिज सबैले यस रक्तपातपूर्ण, पेट-रेन्चिङ रिटेलिङमा अभिनय गरे। रिमेकले स्रोत सामग्रीलाई सम्मानका साथ ह्यान्डल गर्‍यो र गोर र हिंसालाई बढायो। दुई चलचित्रहरूमा एक मात्र स्पष्ट भिन्नता यो हो कि '77 चलचित्रमा नरभक्षी इनब्रीडहरू आणविक परिणामबाट उत्परिवर्ती थिएनन्। 2006 को फिल्मले उत्परिवर्तित खानी कामदारहरूको रूपमा बर्बरहरूलाई प्रदर्शन गर्यो। तर के त्यहाँ मोजावे मरुभूमिमा वास्तवमा एक जन्मजात नरभक्षी परिवार थियो? त्यहाँ थिएन, तर 1700 स्कटल्याण्डमा एउटा परिवार थियो।
1719 मा, अलेक्ज्याण्डर स्मिथले लेखे, "जीवनको पूर्ण इतिहास र सबैभन्दा कुख्यात राजमार्गवासीहरूको डकैती।" यस चयनमा, उत्तरी च्यानलको नयाँ सडकबाट घोडामा सवार पति र पत्नीको कथा पढ्छ। श्रीमानले जंगली जंगली भएको दाबी गरेको भन्दै उनीहरुमाथि आक्रमण भएको थियो । श्रीमती भने जोगिएनन्, तर श्रीमान बाँचे । राजाले यी बर्बरहरूलाई खोज्न 400 मानिसहरू पठाए। उनीहरूले जे फेला पारे त्यसले उनीहरूलाई सधैं सतायो।
एउटा गुफा भित्र सावनी बीन नामका मानिस आफ्नी श्रीमती 'ब्ल्याक' एग्नेस डगलससँग बस्थे। तिनीहरूले लगभग 50 परिवारका सदस्यहरू जन्माएका थिए जसलाई उनीहरूले हुर्काए, शिकार गरे र संगै मिले। तिनीहरूलाई भेट्टाउने मानिसहरू डराए। सुर्तीको पात वा गाईको मासुको छालाजस्तै मानिसको मासुका टुक्राहरू गुफाको वरिपरि सुक्दै झुण्डिएका थिए। हड्डीहरू, सुन र चाँदीको साथ गुफाको पर्खालहरू सजाइएको थियो। पिडितका सामानको थुप्रो र थुप्रो जमिनभरि थुप्रिएको थियो ।
तरबार, औँठी, पेस्तोल र अन्य ट्रिंकेटहरू परिवारका बीचमा बसे। महिलाहरू आन्द्रासँग खेलिरहेका थिए र पुरुषहरू रगतजस्तो देखिने गरी पिइरहेका थिए। छोटो भिडन्त पछि, 400 को समूहले बीन परिवारलाई राउन्ड अप गर्न र न्यायको लागि राजालाई फिर्ता गर्न सक्षम भयो।
जब यो निष्कर्षमा पुग्यो कि तिनीहरू साँच्चै जन्मजात नरभक्षीहरू थिए, राजाले निर्णय गरे कि सावनी बीनलाई कास्ट्रेट गरिनेछ र उसको अंगहरू हटाइनेछ। यसमा दुवै खुट्टा र हातहरू समावेश थिए। दण्ड बीन परिवारका सबै पुरुषहरूलाई पनि हुनेछ। सावनी सहित प्रत्येक मानिसको रगत बग्यो। राजाले "मानवता विरुद्धको अपराध" भनेर ठानेको लागि एग्नेस र महिला र बच्चाहरू सबैलाई खम्बामा जिउँदै जलाइयो। तर त्यसो भए केले बीनको कार्य र जीवनशैलीलाई राजाको शासनको तुलनामा अलग गर्‍यो? यो केहि थियो जसले क्रेभेनलाई प्रेरित गर्यो।
"तर यदि तपाईंले यसलाई हेर्नुभयो भने, तिनीहरूले उनीहरूलाई समात्दा सभ्यताले गरेको भन्दा धेरै नराम्रो काम गरिरहेका थिएनन्," 1977 मा वेस क्रेभन बताउँछन्। सबैभन्दा सभ्य कसरी सबैभन्दा बर्बर हुन सक्छ र सबैभन्दा बर्बर कसरी सभ्य हुन सक्छ। मैले यी दुई परिवारलाई एकअर्काको ऐनाको रूपमा निर्माण गरें। आफूलाई हेर्दा, आफूलाई ठूलो असलको लागि मात्र होइन तर ठूलो नराम्रोको लागि पनि क्षमता भएको सोच्न मलाई निकै रोचक लाग्यो।”
Sawney Bean को कथा अनुसन्धान र regurgitated जारी रहँदा, यो पत्ता लगायो कि कुलले आफ्नो मृत्युदण्ड अघि कम्तिमा एक हजार मानिस खाएको थियो। अन्य रिपोर्टहरू राजाद्वारा पुष्टि गरिएको थियो कि विगत 25 वर्षका धेरै यात्रुहरू हराएका थिए। के क्रूर सजाय जायज थियो? प्रेरणाको लागि यस्तो रक्तपातपूर्ण र घृणित कथाको साथ, दुबै चलचित्रहरू स्कटल्याण्डको प्रेतवाधित सडकको सत्य कथामा बाँच्छन्।
The Hills Have Eyes (2006) Tubi, Prime, Google Play, Vudu, र Apple TV मा स्ट्रिम गर्न उपलब्ध छ।
The Hills Have Eyes (1977) प्राइम, टुबी र एप्पल टिभीमा उपलब्ध छ।
३. भेरोनिका (२०१७)
निर्देशक Paco Plaza को मनमोहक स्पेनिश फिल्म, भेरोनिका, 2017 मा Netflix मा सुरु भयो। धेरै दर्शकहरू तुरुन्तै झुक्किए र डराए। यद्यपि दृश्यहरूले कुनै पनि स्वामित्वको चलचित्रको सामान्य ट्रोपहरू प्रतिबिम्बित गरे पनि, वातावरण अँध्यारो थियो; अभिनय कडा।
म आफैं फ्यान भएँ किनकी म एक सेकेन्ड पनि टाढा हेर्न नसक्ने दृश्यहरू मेरो अगाडि खेलेको थियो। यसको रिलिज भएको केही हप्ता पछि, धेरै मानिसहरूले ट्विटरमा फिल्मलाई नेटफ्लिक्समा सबैभन्दा डरलाग्दो फिल्मको रूपमा प्रशंसा गरे। भेरोनिकाले सान्ड्रा एस्कासेना, ब्रुना गोन्जालेज, क्लाउडिया प्लेसर, इभान चाभेरो र एना टोरेन्टको प्रतिभालाई तारा बनाएको छ। पाको प्लाजा द्वारा लिखित र निर्देशन गरिएको, यो फिल्म म्याड्रिड स्पेनमा 15 वर्षीया केटी (भेरोनिका) लाई पछ्याउँछ जब उनी जादूमा रुचि विकास गर्न थाल्छिन्। उनले आफ्नो साथीलाई मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको मृत पूर्व प्रेमीलाई सम्पर्क गर्न प्रयास गर्न र मद्दत गर्न ग्रहणको समयमा स्कूलमा ओइजा बोर्ड ल्याउँछिन्। मध्यस्थता र एक दृश्य मा संलग्न पछि, भेरोनिका एक भूत द्वारा कब्जा हुन्छ। यो फिल्मको रिलीज सम्म थिएन, कि अमेरिकी दर्शकहरूले भूत पछाडिको वास्तविक कथा पत्ता लगाए।
सन् १९९० को प्रारम्भमा स्पेनमा एउटी युवतीले आफ्नो सम्पूर्ण संसारलाई उल्टो पारिदिएकी थिइन् । उनको नाम Estefania Gutierrez Lazaro थियो। उनी सम्पूर्ण स्पेनमा सबैभन्दा प्रसिद्ध स्वामित्व कथा बन्नेछिन्। एक जवान Estefania जादू मा विश्वास गर्न थाले र यसको लागि एक जोश देखायो। उनका आमाबाबुले निर्णय गरे कि यो केवल एक चरण हो, र हस्तक्षेप गर्न केही गरेन, किनकि उनले ouija बोर्डहरूसँग खेल्न जारी राखे। वसन्तमा एक दिन, उनले आफ्नो साथीलाई आफ्नो मृत पूर्व प्रेमीसँग कुरा गर्न मद्दत गर्न स्कूलमा बोर्ड लैजाने निर्णय गरे।
एस्टेफानियाले अनुष्ठान सुरु गर्दा, एक ननले औइजा बोर्ड भत्काएर र बच्चाहरूलाई गाली गर्दै सेन्समा अवरोध गरिन्। एस्टेफानियाका साथीहरूले गवाही दिए कि टुक्रा टुक्राहरूबाट एउटा अनौठो सेतो धुवाँ निस्क्यो र एस्टेफानियाले गल्तिले यसलाई सास फेर्यो। त्यसपछिका महिनाहरू एस्टेफानिया र उनको परिवारको लागि डरलाग्दो साबित भयो। उनी आफ्ना दाजुभाइलाई देखेर भुकाउन र कराउन थालिन्। हप्तामा केही चोटि, उनी चक्करमा पर्छन् र कोठाका कुना-कुनाहरूमा अँध्यारो लुगा लगाएका व्यक्तिहरू हिंडिरहेका आफ्ना आमाबाबुलाई रुँदै रुन्थिन्।
लाजारोले आफ्नी छोरीलाई डाक्टरहरू र विशेषज्ञहरूकहाँ लगे, तर उनलाई के समस्यामा परेको थियो भनेर कसैले पनि सहमत हुन सकेनन्। उनीहरूलाई थाहा थियो कि त्यहाँ उनलाई मानसिक रूपमा असर गरिरहेको थियो, तर परिवारको लागि कुनै जवाफ थिएन। छ महिनाको पीडा र धेरै अस्पताल भ्रमण पछि, एस्टेफानिया अस्पतालको ओछ्यानमा मरे, मृत्युको कारण अज्ञात छ। परिवारले त्रासदीको साथ समात्न खोज्दा, विचित्र घटनाहरूले अझै पनि उनीहरूलाई सतायो। तिनीहरूको घरभित्र डरलाग्दो चिच्याहट र चर्को आवाज जारी थियो। एस्टेफानियाको तस्बिर सेल्फबाट खसे र आफैंमा दहन भयो। यसले श्री लाजारोलाई अधिकारीहरूलाई फोन गर्न प्रेरित गर्यो। पुलिस आइपुग्दा उनीहरूले लाजारोको घरमा खोजी गरे। एस्टेफानियाको कोठामा उनीहरूले तिनका पोस्टरहरू सबै च्यातिएका भेट्टाए मानौं कुनै जनावर उपस्थित थिए।
उनीहरूको रिपोर्टमा, एक अधिकारीले क्रुसिफिक्स पर्खालबाट खसेको र अप्राकृतिक तरिकाले झुकिएको देखेको दाबी गरे। उनीहरू जाँदै गर्दा अर्को अचम्मको घटना भयो: गाढा रातो दागले उनीहरूलाई घरभरि पछ्याउन थाल्यो। यी आधिकारिक कथनहरूले एस्टेन्फानियाको कथालाई म्याड्रिडको सार्वजनिक आँखामा उत्प्रेरित गर्यो। तिनीहरूको वरिपरि अराजकतासँग व्यवहार गरेको एक वर्ष पछि, लाजारोहरू सारियो। तिनीहरू कतै नयाँ बसोबास गरेपछि, सबै भूतहरू पूर्ण रूपमा बन्द भयो।
"स्पेनमा, यो धेरै लोकप्रिय छ," प्लाजा बताउँछ। "किनभने यो हो, हामीले फिल्ममा भनेझैं, एक प्रहरी अधिकारीले मात्रै भनेका छन् कि उसले असाधारण कुरा देखेको छ, र यो आधिकारिक पुलिस टिकटको साथ रिपोर्टमा लेखिएको छ। तर मलाई लाग्छ जब हामी केहि बताउँछौं, त्यो समाचारमा नै भए पनि कथा बन्छ। वास्तविकता कत्तिको फरक छ भनेर जान्नको लागि तपाईले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू मात्र पढ्नु पर्छ, कसले भनेको छ भन्ने आधारमा।
तपाईंले नेटफ्लिक्स र प्लुटो टिभीमा आफ्नो लागि फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ।
2। Exorcist (1973)
यो चलचित्रलाई पुन: बोलाइएको छ, नक्कल गरिएको छ, र यति धेरै कुरा गरिएको छ कि तपाइँ तपाइँको आफ्नै टाउको पूर्ण 360 मा घुमिरहेको छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, वास्तवमा यो डरलाग्दो चलचित्रलाई डरलाग्दो सिनेमामा यस्तो उचाइमा के ले पुग्यो? लेखक विलियम पिटर ब्लाट्टीले आफ्नो डरलाग्दो उपन्यासमा आधारित सत्य कथा के थियो?
हामीले 1949 मा रोनाल्ड हङ्केलर नाम गरेको जवान केटाको यात्रा गर्नुपर्छ। रोनाल्ड एक सामान्य मेरील्याण्ड उपनगरमा बस्थे। जर्मन-लुथरन परिवारमा हुर्केका, कसैले पनि सोचेका थिएनन् कि उसलाई यति भयानक घटना हुनेछ। रोलान्डले आफ्नो काकी ह्यारिएटसँग गहिरो लगाव बनाएका थिए जसले आफूलाई आध्यात्मिक र माध्यम भएको दाबी गरे। उनको 13 औं जन्मदिनको लागि, उनको मृत्युको केही समय अघि, ह्यारिएटले रोनाल्डलाई ओइजा बोर्ड उपहार दिए।
यो दस्तावेज वा पुष्टि गरिएको छैन यदि यो "उपहार" ले पछि के भयो (यद्यपि यो सधैं अनुमान गरिएको छ)। रोनाल्डले शोकको सामना गर्न थालेपछि, उनले आफ्नो बेडरूममा असाधारण घटनाहरू अनुभव गरे। उसले आफ्ना आमाबाबुलाई भन्यो कि उसले भित्तामा खरानी सुन्न सक्छ, भुइँ चर्किरहेको छ, यद्यपि यसमा कोही उभिएको छैन। अझ चाखलाग्दो तथ्य यो थियो कि उनीहरूले उनको गद्दा आफैं सरेको देखे। चिन्तित, उनका आमाबाबुले आफ्नो लुथरन मन्त्रीको निर्देशन खोजे, जसले तिनीहरूलाई जेसुइटसँग कुरा गर्न पठाए।
फेब्रुअरी 1949 मा, फादर ई. अल्बर्ट ह्युजेस द्वारा पहिलो बहिष्कार प्रयास गरिएको थियो। केटा फिट हुँदा उनले वास्तवमा रोनाल्डलाई आफ्नो ओछ्यानमा पट्टा गरे। द्वेषपूर्ण क्रोधमा, रोनाल्डले आफ्नो गद्दाको बक्स स्प्रिङबाट एउटा टुक्रा भाँच्यो र पादरीलाई काट्न प्रयोग गर्यो। केटाले बुबाको छातीमा गहिरो घाँटी काट्न सफल भयो, भूतपूर्व कार्य अधुरो छोडेर।
त्यस महिना पछि रोनाल्डको शरीरमा खरोंचका निशानहरू निस्किए। यी खूनी नक्काशीहरूले "लुइस" शब्द बनायो। हङ्केलर्सको सेन्ट लुइस, मिसौरीमा परिवार थियो र उनीहरूले निर्णय गरे कि यो आफ्नो छोरालाई पश्चिमको गेटवेमा लैजानु एउटा शगुन हो। आइपुगेपछि, रोनाल्डको भतिजा सेन्ट लुइस विश्वविद्यालयमा पढिरहेको थाहा भयो। चचेरे भाईले विश्वविद्यालयका अध्यक्षसँग कुरा गरे जो जेसुइटहरूसँग मित्र थिए। उनले आफ्नो चचेरे भाई रोनाल्डको उथलपुथल बताइन्, र दुई जेसुइटहरू जवान केटाको निरीक्षण गर्न पठाइयो।
फादर वाल्टर एच हलोरन र रेभेरेन्ड विलियम बोडर्न। दुई पवित्र पुरुषहरू र छ जना सहायकहरूले अर्को बहिष्कारको प्रयास गर्नेछन्। मार्च 1949 मा, पुरुषहरूले एक हप्ताको लागि प्रयास गरे। केहि पनि काम गरिरहेको देखिएन र सबै खराब हुँदै गयो। रोनाल्डले गट्टरल टोनमा कुरा गरे र कोठाका वस्तुहरू आफ्नै सहमतिमा तैरिन्थ्यो। बोडरन र हलोरनले सम्पूर्ण परीक्षाको दस्तावेजीकरण पत्रिकाहरू राखे। केटाको छातीमा रगतको X फारम देखेर बाउडर्न छक्क परे, जसले गर्दा बच्चालाई कम्तिमा १० वटा भूतहरू पसेको थियो भन्ने विश्वास गर्न अग्रसर भयो। मार्च 10 मा, केटाले आफैंलाई पिसाब गरे र पुरुषहरूमा अश्लील अश्लील कुराहरू थुकेपछि दुई पादरीहरूले हार मानेका थिए। दुई पादरीहरूले उनलाई एलेक्सियन ब्रदर्स अस्पतालमा भर्ना गर्न सुझाव दिए, जुन परिवारले गरे।
तैपनि, रोनाल्डको विचित्र व्यवहार मात्र नराम्रो भयो। उनी अब कुनै पनि धार्मिक वस्तु वा अवशेषमा चिच्याउँथे। उहाँले परमेश्‍वरको आराधना गर्नेहरूलाई र शैतानको शक्तिको बारेमा चिच्याउनेहरूलाई सराप्नुहुन्थ्यो। परिवार र डाक्टर र पुजारी सबैसँग पर्याप्त थियो। एक महिना लामो युद्ध पछि अप्रिलको मध्यमा, तिनीहरूले अन्तिम पटक प्रयास गरे। पुजारीहरूले रोनाल्डको ओछ्यानलाई क्रुसिफिक्स र मालाले घेरेका थिए। बहिष्कारको समयमा, फादर हलोरनले सेन्ट माइकललाई केटालाई हानि गर्ने अँध्यारो शक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्न आह्वान गर्नुभयो। अन्ततः, सात मिनेट पछि, रोनाल्डले आक्रमण गर्न छोड्यो र ओछ्यानमा लङ्गडा भयो। पुजारीहरूले यो समाप्त भएको पुष्टि गरे र रोनाल्डले कथित रूपमा भने, "उहाँ गएको छ।"
यद्यपि डरलाग्दो घटना समाप्त भयो, रोनाल्डको कथा विलियम पिटर ब्लाट्टीले 1971 मा लेख्ने थियो। जर्जटाउन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा दुई पादरीहरूको पत्रिकाहरू पत्ता लगाएपछि, ब्लाट्टीले रेभरेन्ड बाउडर्नलाई भेटे र पुस्तक लेख्नको लागि उनको स्वीकृति प्राप्त गरे। सन् १९७१ मा रिलिज भएको यो पुस्तक बेस्टसेलर भयो र चार महिनासम्म सूचीमा रह्यो।
आज सम्म यो 13 मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू बेचेको रिपोर्ट गरिएको छ। 1973 मा, निर्देशक विलियम फ्रेडकिन ब्लाट्टीसँग फिल्मको बारेमा सम्पर्क गरे, र ब्लाट्टीले स्क्रिप्ट लेखे। यद्यपि दुबै पुरुषहरूले चलचित्र र पुस्तकको साथ केही स्वतन्त्रताहरू लिए, अनुकूलनहरूले अझै पनि देशभरि लाखौंलाई डराए। लिन्डा ब्लेयर, म्याक्स भोन सिडो, एलेन बर्स्टिन र जेसन मिलरले उत्कृष्ट कलाकारको नेतृत्व गरेका छन्। तर, फिल्मले उन्माद र आतंक निम्त्यायो।
यो रिपोर्ट गरिएको थियो कि थिएटर जानेहरूलाई मिरगीको दौरा थियो वा बिरामी भएर फ्याँकिन्छ। धार्मिक उत्साहीहरूले वार्नर ब्रदर्सको बिरूद्ध अभियान सुरु गरे र यो अफवाह छ कि फिल्मको रिलीज पछि लिन्डा ब्लेयरको वरिपरि अंगरक्षकहरू थिए। तर यस अराजकताको समयमा रोनाल्ड हन्केलरलाई के भयो?
न्यु योर्क पोस्टका अनुसार, हङ्केलरले सामान्य जीवन जिउन थाले। यदि सामान्य भनेको नासाको लागि काम गर्नु हो। त्यो सहि हो...नासा। यद्यपि हङ्केलर अन्तरिक्ष यात्री बन्ने थिएनन्, उनी पुरुषहरूको समूहमा थिए जसले 60 को दशकको अपोलो मिसनहरूको लागि अत्यधिक गर्मीको प्रतिरोध गर्न सामग्रीलाई पेटेन्ट गरेका थिए। उनी सन् २००१ मा सेवानिवृत्त भए र शान्त जीवन बिताएर अन्धकारमा डुबे। सन् २०२० मा उनको निधन भएको अनुमान गरिएको छ ।
तपाईंले नेटफ्लिक्स र गुगल प्लेमा डराउने सिनेमाको यो क्लासिक टुक्रा हेर्न सक्नुहुन्छ। *गत वर्ष यो रिपोर्ट गरिएको थियो कि डेभिड गोर्डन ग्रीन (हेलोवीन, हेलोवीन किल्स, हेलोवीन एन्ड्स) रिमेकको कप्तानी गर्दै हुनुहुन्छ।
1. द गर्ल नेक्स्ट डोर (2007)
होइन, यो 2004 को एलिशा कुथबर्ट कमेडी होइन। बरु, ज्याक केचमको उपन्यास र पछि फिल्मलाई प्रेरित गर्ने सत्य कथा एकदमै डरलाग्दो रूपमा खराब छ। केटी अर्को ढोका 2007 मा रिलीज भएको थियो। यसले Blythe Auffarth, विलियम Atherton, Blanche बेकर र Kevin Chamberlin अभिनय गरेको थियो। फिल्म ग्रेगरी विल्सन द्वारा निर्देशित थियो, र केचम को 1989 उपन्यास मा आधारित थियो।
निम्न दुखद सत्य कथा युवा पाठकहरू वा निस्सार व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त छैन।
सन् १९६५ इन्डियानापोलिस, इन्डियानामा थियो। दुई जवान केटीहरूलाई पारिवारिक साथीसँग बस्न पठाइयो। तिनीहरूको नाम, Slyvia र Jenny Likens। तिनीहरूका आमाबाबु कार्निवल कामदारहरू थिए; त्यतिबेला, तिनीहरूका बुबा कामको लागि पूर्वी तटमा थिए। उनीहरुकी आमा पसल चोरेको आरोपमा जेलमा थिइन् । जुलाई 1965 मा, सिल्भिया र जेनी गर्ट्रुड बानिस्जेव्स्की र उनका दुई छोरी पाउला र स्टेफनीसँग बस्न गए, जो लाइकेन्सको रूपमा एउटै विद्यालयमा पढेका थिए।
श्रीमती लाइकेन्स जेलबाट रिहा भएपछि, उनी श्री लाइकेन्सलाई भेट्न र काममा फर्किन पूर्वी तटमा गए। गर्ट्रुडले लाइकेन्सहरूलाई आश्वासन दिए कि केटीहरूलाई उनको आफ्नै रूपमा व्यवहार गरिनेछ र केटीहरूको हेरचाहको लागि हप्तामा $ 20 भुक्तानी हुनेछ भन्ने सम्झौता भएको थियो। यो नोभेम्बरमा लिकन्स घर नफर्केसम्म हुनेछ।
पहिलो महिना राम्रो देखिन्थ्यो, श्री लाइकेन्स द्वारा भुक्तानी सधैं समय मा थियो र बच्चाहरु Gertrude को आफ्नै बच्चाहरु संग स्कूल जाँदै थिए। सबैजना मिलेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर श्री लाइकनको भुक्तानी ढिलो आउन थालेपछि कुराले ठूलो मोड लियो। गर्ट्रुडले स्लिभिया र जेनीलाई हराउन थाले। उसले तिनीहरूको पाइन्ट तानेर तिनीहरूको नाङ्गो तल्लो भागलाई विभिन्न वस्तुहरूले पिट्ने गर्थी। अगस्ट आइपुग्दा, गर्ट्रुडले आफ्नो क्रोधलाई सिल्भियामा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले जेनीलाई छिन्ने प्रयास गरेमा कुटपिट र अन्य सजायको धम्की दिइन्।
एक साँझ गर्ट्रुडले आफ्नै छोरीहरूलाई स्लिभियालाई सजाय दिने निर्णय गरे। पाउला स्टेफनी र एक छिमेकी केटा, रेन्डी गोर्डन लेपरसँग, स्लिभियालाई जबरजस्ती खाना खुवाए जबसम्म उनी बान्ता गर्दैनन्। त्यसपछि उनीहरूले उनलाई रिगर्जेटेड अवशेषहरू खान जबरजस्ती गरे। पछि हप्तामा, स्कूलमा, स्लिभियाले ब्यानिस्जेव्स्कीको बारेमा अफवाह सुरु गरेर बदला लिइन्। उनले दुवै बानिस्जेस्की बहिनीहरू वेश्याहरू थिए भनेर संकेत गरिन्। जब स्टेफनीको प्रेमी कोय रान्डोल्फले अफवाह सुने, उनले स्कूल पछि स्लिभियालाई क्रूरतापूर्वक आक्रमण गरे। उसले उनलाई बारम्बार मुक्का हान्यो र बानिस्जेस्कीको घरको भित्तामा फ्याँकिदियो।
जब गर्ट्रुडले अफवाहको बारेमा थाहा पाए, उनले बच्चाहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरे र उनीहरूले स्लिभियालाई यातना दिने तरिकाहरू बनाए। तिनीहरूले स्लिभियालाई कोर्रा र लात हाने र तिनलाई खुवाउन बेवास्ता गर्थे। चाँडै स्लिभियाले आफूले पाएको घाउ लुकाउन सकेन र एक छिमेकीले गुमनाम रूपमा स्कूललाई ​​फोन गरे। उसले स्लिभिया र उनकी बहिनीलाई स्कूलबाट घर हिँडिरहेको देखेको थियो, र स्लिभियाको शरीरमा खुला घाउहरूको झलक देखेको थियो।
विद्यालयले एक नर्स र एक शिक्षक पठाए, तर गर्ट्रुड बानिस्जेस्कीले भने कि स्लिभिया भागेकी थिइन् र सधैं खराब स्वच्छता थियो। स्कूलका अधिकारीहरू गएपछि, गर्ट्रुडले स्लिभियालाई तहखानेमा बाँधे। दुवै लाइकेन्स केटीहरू अब डराए र उनीहरूले प्राप्त गरेको यातनालाई कसरी रोक्ने भन्ने थाहा थिएन। स्लिभियालाई बेसमेन्टमा नाङ्गो अवस्थामा बाँधेर, गर्ट्रुडले छिमेकी बच्चाहरू र पाउलाका साथीहरूलाई जोम्बिफाइड, कुपोषित स्लिभिया हेर्नको लागि निकेल चार्ज गर्न थाले।
दुबै बानिस्जेव्स्की बहिनीहरू, आफ्ना प्रेमी र छिमेकीहरू, माच र चुरोटले स्लिभियालाई जलाउनेछन्। उनीहरूले उनीमाथि चर्को पानी खन्याए र विदेशी वस्तुले बलात्कार गरे । बच्चाहरूले स्लिभियाको पेटमा 'म वेश्या हुँ' भन्ने शब्दहरू कोर्न तातो पोकर प्रयोग गर्दा जेनी स्तब्ध भए। एक बिन्दुमा यो रिपोर्ट भयो कि तिनीहरूले गरिब केटीलाई आफ्नो मल खुवाए। अक्टोबर 25 मा, गर्ट्रुडले आफ्नो बाइन्डिङ परिवर्तन गर्दै गर्दा, स्लिभियाले भाग्न खोजे। यद्यपि उनी असफल भइन्, र गर्ट्रुडले उनलाई पछाडिको ढोकामा पुग्नु अघि समातिन्। सुश्री बानिस्जेव्स्कीले त्यसपछि स्लिभियालाई नुहाइदिइन् र उनलाई पिट्न दोहोर्याइन्। अर्को दिन, स्लिभियाले बुद्धिमानीपूर्वक बोल्न सकेन र आफ्नो हात र खुट्टाको चाल गुमाए।
16 वर्षको उमेरमा, स्लिभिया लिकन्सको मस्तिष्क रक्तस्राव र कुपोषणका कारण मृत्यु भयो।
अब एक मृत शरीरको कब्जामा, Gertrude Baniszewski ले महसुस गरे कि उनले पुलिसलाई बोलाउनु पर्छ। घटनास्थलमा पुगेपछि अधिकारीहरूलाई भनियो कि स्लिभिया केटाहरूको समूहसँग भागेको थियो र केटी ढलेपछि उनीहरूले उनलाई फिर्ता गरेका थिए। यद्यपि, जेनी लिकन्सले एक अधिकारीलाई मुखले कानाफूसी गर्न सक्षम भइन्, "मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। म तपाईलाई साँच्चै के भयो भन्नेछु। ”
भोलिपल्ट गर्ट्रुड बानिस्जेस्की, उनका छोरा जोन बानिस्जेस्की, उनका छोरी पाउला र स्टेफनी, कोय हबर्ड र उनका भाइ रिचर्डलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरियो। छिमेकका पाँच बालबालिका, र्यान्डी लेपर, माइकल मोनरो, डार्लिन म्याकगुइरे, जुडी ड्यूक र एन सिस्को, अक्टोबर २९ मा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई पछि उनीहरूका अभिभावकको हिरासतमा रिहा गरियो र अदालतमा गवाही दिन पेश गरियो।
उनीहरूले सुधारात्मक विद्यालयमा दुई वर्ष काम गर्नेछन्। मे 1966 मा गर्ट्रुड, पाउला, जोन र स्टेफनी सबैलाई बेवास्ता गरेको र स्लिभिया लिकन्सको हत्याको वकालत गरेकोमा दोषी ठहर गरियो। गर्ट्रुडलाई आजीवन कारावासको सजाय दिइयो, यद्यपि उनी 1985 मा प्यारोलमा रिहा भइन् र पछि 1990 मा उनको मृत्यु भयो। पाउलालाई दोस्रो-डिग्री हत्याको दोषी ठहराइयो र 1972 मा रिहा गरियो। जोन बानिस्जेस्की, स्टेफनी बानिस्जेव्स्की, हबर्डसँगै, केवल दुई वर्ष मात्र हत्याको लागि सजाय पाए। 1968 मा प्यारोल हुनु अघि।
यो घृणित मामलाले इन्डियानालाई कडा बाल दुर्व्यवहार कानूनहरू स्थापना गर्न नेतृत्व गर्यो र उनीहरूको राज्यको इतिहासमा सबैभन्दा खराब अपराध मानिन्छ। यदि तपाईंले यस फिल्मलाई स्टीफन किङले "हेनरी: पोर्ट्रेट अफ ए सिरियल किलर पछिको पहिलो प्रमाणिक रूपमा स्तब्ध पार्ने अमेरिकी फिल्म" भनेर प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ भने, यो Netflix, Vudu, Prime र Apple TV मा उपलब्ध छ।
यदि तपाईं यी पाँच फिल्महरू बाँच्नु भएको छ भने, तपाईंलाई सबैभन्दा डराएको कुन हो? डरलाग्दो सिनेमाको जरा जहिले पनि हुन्छ जबसम्म हाम्रो वरिपरि मकब्रे फूल्छ। यद्यपि हामी यस बगैंचामा हिंड्दा हामी सावधान हुनुपर्छ; आफ्नो खुट्टालाई ध्यान दिनुहोस्, अज्ञात सडकहरूबाट टाढा रहनुहोस् र आफ्ना छिमेकीहरूलाई चिन्नुहोस्!